Qoysaska | Samfunnskunnskap.no
Sannad walba waxa ku dhasha Norwey qiyaastii 60 000 oo carruur ah. Haweenka Noorwiijigu waxey midiiba celcelis ahaan qiyaastii dhashaa 1.5 carruur ah. Saddex ka mid ah afartii carruur ahba waxay la nool yihiin labadooda waalid, halka ka afraadna uu la nool yahey labada waalid mid ka mid ah iyo lammaanahooda cusub.
Saddex ka mid ah afartii wada deggani waa xaas, balse hal ahaan afartii ba waa dad isla deggan. Da’da celcelis ahaa lagu guursadaa marka koowaad waa 30 sanno wixii ka sarreeya rag iyo dumarba. In badan way wada deggaan dhawr sanno inta aanay is guursan. Sannad kasta waxa is fura in ku dhow 10 000 oo is qabay. Waa ku dhawaad kala badh inta is guursata sannad kasta.
Inta badani qoys ayey ka tirsan yihiin. Qaar ayaa la deggen kuwo kale oo qoyska ka mid ah, halka qaarna ay keli deggen yihiin. Kuwa gaar u deggeni iyaguna inta badan qoys ayey leeyihiin, waxaa se laga yaabaa in qoysku guri kale deggen yahay oo ku yaal magaalo kale ama dal kale.
Guriga ku noolaansho
Guriga wadaag waa dad wada deggan guri, oo wadaaga dhaqaale. Guriga Norwey maanta waxa ku noolaan kara hal qof iyo wixii ka badan.